ကျောက်မော်မြို့ဟောင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ကျောက်မော်မြို့ဟောင်းသည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေကျင်မြို့ မြောက်ဘက် ၂၄ မိုင်အကွာတွင် တည်ရှိပြီး ဟံသာဝတီ ၃၂ မြို့အဝင် မြို့ ဖြစ်သည်။ ကျောက်မော်တွင် ကုန်းဘောင်ခေတ်က မြို့သူကြီး အဆက်ဆက် ထားရှိ အုပ်ချုပ်စေသည်။
ကျောက်မော်မြို့စားဟူ၍လည်း ရှိရာ သာယာဝတီမင်း၏ ကျောက်မော်မြို့စား မိဖုရားနှင့် ကျောက်မော်မြို့စား ဝန်ကြီး ဦးကြာပုတို့သည် ထင်ရှားသည်။
ဒုတိယမဟာရာဇဝင်တော်ကြီးတွင် "သက္ကရာဇ် ၁၂၁၁ ခုနှစ် နယုန်လဆန်း ၁၄ ရက်နေ့ကစ၍၊ ရတနာပူရ အင်းဝမြို့တွင် မဟာသကျရံသီ ကျောက်တော်ကြီးဘုရား ကိန်းဝပ်တော်မူသည့် အုတ်ပြာသာဒ် ပြိုပျက်သည်ကို၊ ကျောက်မော်မြို့စား ဝန်ကြီး သတိုးမင်းကြီး မဟာမင်းလှသီဟသူ၊ ပန်းပဲဝန်အတွင်းဝန် သတိုးမင်းကြီးမဟာမင်းလှကျော်သူတို့ကို၊ လှေအမှုထမ်း လူ ၃ဝဝဝ ပေးအပ်၍ ပင့်ဆောင်စေရာ၊ သုံးရက်နှင့် မုတ္တမတံခါးပြင်၊ ဘုရားပင့်ဆောင်ရန် ဘောင်ပေါ်သို့ရောက်ကြောင်း လျှောက်ထား၍၊ ၎င်းနှစ်ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၆ ရက်နေ့တွင်၊ ဆရာတော် သံဃာတော်တို့ကို၊ သမ္ဗာန်တော်များတွင် တင်ဆောင်၍၊ ရှေ့ဦး ရှေ့ဖျား ကြွသွားနှင့်စေပြီးလျှင် ဘဝရှင်မင်းတရားကြီးဘုရား၊ ဘောင်တော်လှေတော် သမ္ဗာန်တော်များနှင့် မင်းညီမင်းသား မှူးတော်မတ်တော်တို့ ခြံရံ၍ ထွက်တော်မူပြီးလျှင်၊ ဘုရားတင်ဘောင်ပြာသာဒ်ကို မီးသင်္ဘောတော်နှင့် ဆွဲစေ၍၊ ရွှေမြို့တော်တောင်မျက်နှာ၊ တောင်သမန်အနီး အထက်တည်ထားဆောက်လုပ်တော်မူသည့် အုတ်ပြာသာဒ်အတွင်း၊ ပင့်ဆောင်ကိုးကွယ်တော်မူ၏" ဟု ဖော်ပြသည်။
ကုန်းဘောင်ခေတ် အမရပူရ ဒုတိယမြို့တည်သာယာဝတီမင်း (၁၈၃၇-၁၈၄၆)နှင့် `သီရိသုစန္ဒာမာလာမဟေ´ဘွဲ့အမည်ရှိ ရွှေဘိုမင်းတရားကြီး၏ တောင်ဆောင်တော်၊ ကျောက်မော်မြို့စား မိဖုရားတို့တွင် သားတော်နှစ်ပါးတို့ ထွန်းကားခဲ့ရာ သားအကြီးမှာ ပဉ္စမသင်္ဂါယနာတင် မင်းတုန်းမင်း ဖြစ်၍ အငယ်မှာ သတိုးမင်းရဲကျော်ထင် ဘွဲ့ခံ ကနောင်မင်းသား ဖြစ်သည်။
↑ တင်နိုင်တိုး (ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၃). မြန်မာပြည်တစ်ခွင် လမ်းညွှန်. မဇ္ဈိမစာပေ, ၈၆။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကျောက်မော်မြို့ဟောင်း&oldid=489263" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၅:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။